Ny Tenan'ny Tenany sy ny Tenan'ny Fanahy dia tsy afaka mihaona mihitsy. Ny iray amin'izy roalahy dia tokony hanjavona; tsy misy fitoerana ho azy roa.
Indrisy, indrisy, ny fananan'ny lehilahy rehetra an'i Alaya, ho iray miaraka amin'ny Fanahy Lehibe, ary raha manana izany izy dia tokony ho kely sisa ny hahazo an'i Alaya!
Jereo fa toy ny volana, taratra amin'ny onjan-drivotra, Alaya dia taratry ny kely sy ny lehibe, dia fitaratra amin'ny atiny bitika, nefa tsy mahatratra ny fon'ny olona rehetra. Mampalahelo fa vitsy ny olona mahazo tombony amin'ny alàlan'ny fanomezana, ny tombotsoan'ny tsy fahaizana mamantatra ny fahamarinana, ny fahitana tsara ny zavatra efa misy, ny fahalalana ny tsy misy!
Vol. 1 JONA, 1905. Tsia
ASA ilay teny hoe "akora" dia ny zavatra miorina na miorina. Ilay zavatra ifotoran'io zavatra io, na miorina eo aminy, dia izao rehetra izao.
Ny teny hoe "mulaprakriti", izay nampiasain'ny Aryanina taloha, dia maneho ny dikany kokoa noho ny tenintsika. "Mula" midika hoe fakany "Prakriti" natiora na resaka. Mulaprakriti, noho izany, fa fiaviany na niaina avy amin'ny toetra na resaka. Amin'izany fomba izany no ampiasaintsika ny teny hoe zavatra.
Ny fahazarana dia maharitra mandrakizay sy enta-mavesatra. Io no loharano sy fiandohan'ny fisehoana rehetra. Ny fahazarana dia mety hahafantatra ny tenany, ary noho izany dia lasa fahatsiarovan-tena. Tsy mampaninona ny fananarana fa ny faka no mibontsina. Ny tsy fahazotoana dia tsy hita amin'ny fahatsapana, satria tsy takatry ny saina. Saingy amin'ny fisaintsainana izany dia mety handalo ao amin'ny toerany ny saina ary hahita izany. Ny tsy tsapan'ny fehezanteny dia tsy zava-maniry fa ny fizarazarana mihetsika amin'ny fihetsika ambany indrindra avy amin'ny akora, amin'ny tsikombany samihafa.
Mandritra ny fahatsiarovan-tena misy dia misy foana. Ny fahatsiarovan-tena tsy miovaova matetika dia ny fihetsehana. Ny fikorontanan-tena no antony mahatonga ny fisehoan-javatra amin'ny alàlan'ny hetsika hafa. Ny fahazarana dia mitovy foana, toy ny akora, saingy adika amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana iraisan'ny saina ho amin'ny resaka fanahy. Ny resaka ara-panahy dia atody. Ny resaka ara-panahy no fiandohan'ny "universes" sy ny tontolo ary ny olona. Ny ifandraisan'ny fihetsiketsehana ara-panahy dia adika amin'ny fanjakana na toe-javatra sasany. Lasa roa ny zavatra iray, ary io fatrany io dia manjaka mandritra ny vanim-potoana fisehoana. Avy amin'ny lafiny ara-panahy indrindra amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny fihenan-dàlana ambanin'ny tsingerina, avy eo dia miverina amin'ny hetsika universal.
Ny olana ara-panahy no manohitra ny fanoherana roa na tsangambato tsy misy fisarahana, izay misy amin'ny fisehoana rehetra. Ny fanesorana azy aloha dia ny hoe fanahy. Ny fahafito manalavitra na midina izany dia olana lehibe eto amintsika. Ny zava-dehibe dia io lafiny io amin'ny zavatra, izay mihetsiketsika, mamolavola ary mamolavola ilay tsato hafa izay antsoina hoe fanahy. Ny Fanahy no lafiny iray amin'ny singa izay mivezivezy, manome hery ary mamolavola ireo tsato hafa izay antsoina hoe raharaha.
Amin'ny fihetsiketsehana ivelany na midina io zavatra io, fa ny raharaha ara-panahy ankehitriny dia voataona ary omena torolalana, taratra sy ho anjarany, avy amin'ny fanjakana ambany ka hatramin'ny olona, ​​amin'ny fihetsiketsehana. Raha toa ka mifandanja tsara ny raharaha ara-panahy dia manondro ny tenany amin'ny fihetsika izy, izay fanehoana zavatra ambony indrindra amin'ny fahatsiarovan-tena, ary tsy mety maty, be dia be ary masina. Raha tsy tonga mahay mandanjalanja anefa ny saina na ny analytic ary fantarina amin'ny alàlan'ny fihetsehana, dia miverimberina hatrany mandritra ny vanim-potoana tsy mihetsika sy ny fivoarana miverimberina.
Ny vatana tsirairay na ny endriny dia ilay fitaovam-pitaterana eo ambonin'izany, ary eo no ilany ny fitsipika mampahafantatra amin'ny vatana na mamorona eo ambaniny. Ny fampandrosoana ara-panahy dia ahitana ny fanovana ny toe-javatra manomboka amin'ny ambany ka hatramin'ny avo kokoa; ny fahazoan-dàlana tsirairay ho fiara ho an'ny fitaratra na fanehoana ny fahatsiarovan-tena. Ny tsiambaratelo amin'ny fahazoana dia tsy amin'ny fananganana sy ny miraikitra amin'ny vatana na amin'ny endriny, fa amin'ny fanaovana tombana ny fiara ho fitaovana hahazoana ny tanjona farany amin'ny ezaka rehetra - tsy fahatsiarovana.
Ny fahatsiarovan-tena dia tsy hafa raha oharina amin'ny tanimanga tanimanga toy izay amin'ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Tsy azo ovana ny fahatsiarovan-tena, satria tsy miova io. Fa ny fiara ampanaovina ny fahatsiarovan-tena dia azo ovaina. Noho izany, ny raharaha amin'ny endriny ara-batana sy ny endriny dia tsy ho afaka maneho taratra sy maneho ny fahatsapan-tena toy ny akanjon'ny Buddha iray na Kristy.
Tonga ny oniversite ho toy ny andro amin'ny fotoana tsy manam-petra, mba hahitana ny raharaha avy amin'ny fanjakana faran'izay tsotra sy tsy manam-pahaizana mankany amin'ny ambaratongam-pahalalana avo indrindra azo atao: avy amin'ny tanimbary na fofona voajanahary, mankany arkanjely na izao tontolo izao Andriamanitra tsy manam-petra. Ny tanjona tokana amin'ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny maha-zava-dehibe ny fanahy, ary ny fivoaran'ny toe-tsaina ho zava-dehibe dia ny: ny fahatsiarovan-tena.